Sawirro: Axmed Madoobe oo Kismaayo kula kulmay saraakiil Mareykan ah + Ujeedka | Dalkaan.com
Home Warkii Sawirro: Axmed Madoobe oo Kismaayo kula kulmay saraakiil Mareykan ah + Ujeedka
Sawirro: Axmed Madoobe oo Kismaayo kula kulmay saraakiil Mareykan ah + Ujeedka
Kismaayo (Caasimada Onine) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa maanta qasriga madaxtooyada Kismaayo ku qaabilay wafdi saraakiil ah oo ka socda Mareykanka, isla-markaana gaaray magaaladaasi.
Axmed Madoobe iyo saraakiishan oo uu horkacayey taliyaha howl-galka Maraykanka ee Soomaaliya Kornayl Thomas Sarrouf ayaa yeeshay wada-hadallo gaara oo saacado qaatay.
Labada dhinac ayaa waxaa kulankooda ay uga arrinsadeen sidii loo dardar-gelin lahaa dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, sida lagu shaaciyey qoraal kasoo baxay Jubbaland.
Sidoo kale waxaa kulanka intii uu socday lagu soo hadal-qaaday xoojinta taageerada uu Mareykanka uu siiyo Soomaaliya, gaar ahaan dhanka ciidamada.
“Kulanka ayaa lagaga hadlay sidii loo dardar galin lahaa dagaalka ka dhanka ah kooxda A-Shabaab iyo tageerada howl-galka Maraykanka ee Soomaaliya” ayaa lagu yiri qoraalka.
Taliyaha howl-galka Maraykanka ee Soomaaliya oo madasha ka hadlay ayaa ballan-qaaday inay si dhow ula shaqeyn doonaan dowladda federaalka iyo Jubbaland, isla-markaana sare loo qaadi doono howl-gallada ka socda gobollada Jubbooyinka iyo Gedo ee maamulkaasi.
Mareykanka ayaa qeyb ka ah dagaalka ka socda gudaha Soomaaliya, wuxuuna duqeymo cirka ah oo ka dhan ah Al-Shabaab haatan ka fuliyaa koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Previous articleMaxay yihiin wada-hadallada u bilaabanayo Taalibaan iyo Mareykanka?
Next articleLionel Messi oo Shaaca ka Qaaday Cida uu u Codeenayo Abaalmarinta Ballon d’Or
Al-Shabaab oo markale goob fagaare ah ku toogatay laba ruux +...